Xuseen Caydiid oo sheegay in ay Itoobiya dooneyso in ay si rasmi ah ula wareegto dekedaha Muqdisho, Kismaayo iyo Berbera. Ruunkinet 23/07/07
Ra'isul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Inj. Xuseen Maxamed Caydiid ayaa shalay ka sheegay magaalada London in ay dowladda Itoobiya ka go'antahay in ay si rasmi ah ula wareegto dekedaha Muqdisho, Kismaayo iyo Berbera.
Kulan balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen dhalin yaro ka tirsan jaaliyadda Soomaaliya ee UK oo uu ka hadlayay Xuseen Caydiid ayuu si weyn ugu dhaleeceeyay qorshaha dowladda Itoobiya iyo mas'uuliyiinta Sare ee dowladda federaalka ah oo uu ku tilmaamay dagar lagu wiiqayo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed.
Mar uu ka hadlayay Xuseen Caydiid hadlkii ka soo yeeray kal hore ee uu ku sheegay in xuduudaha Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeya la baa'in doono, hal baasaboorna ay wada qaadan doonaaan ayaa uu ku tilmaamay in uu ula jeeday in uu dareen geliyo shacabka Soomaaliyeed ugana digo qorshaha iyo danaha dowladd Itoobiya ee arrimaha Soomaaliya.
Xuseen Caydiid ayaa warkiisa raaciyay in uu mar walba Soomaaliyda kaga digayay khatarta dowladda Itoobiya taasoo uu sheegay in uu ku waayay jagadiisi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda.
Mar la weydiiyay Xuseen Caydiid in ay la soo xiriireen mas'uuliyiinta sare ee dowladda si loo soo afjaro khilaafaadka u dhexeeya ayaa waxaa uu ku tilmaamay inaysan jirin arrintaasi in kastoo ay jiraan warar sheegaya in ay arrintaasi wax ka jiraan.
Mudane Xuseen Caydiid ayaa ka codsaday dadkii meesha isugu yimid in ay cafiyaan in kastoo inta badan ay halkaasi ka sheegeen in ay cafiyeen balse waxaa jiray qaar sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Xuseen Caydiid iyo inta la mid ahba la horkeeno caddaaladda.
Kulankaasi waxaa kaloo ka hadlay Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaannada jagadooda ku waayay diidmada ciidamda Itoobiya ay ku joogaan Soomaaliya haatanna ka mid ah xildhibaanada saldhigoodu yahay magaalada Casmara ee dalka Eritereya.